Accueil > Gazetin'ny nosy > Fiarakodia vitagasy : Sokajy faha efatra ny fiara GasyCar
Fiarakodia vitagasy : Sokajy faha efatra ny fiara GasyCar
Hiditra amin’ny fanamboara fiarakodia sokajy faha efatra isika amin’izao fotoana izao. Ity fiarakodia ity izay nantsoin’ny filohampirenena ingahy Andry Nirina Rajoelina hoe “GasyCar”. Ho teraka amin’ity taona 2020 ity izy ity ary ao anatin’ny fahamehana aram-pahasalamana tanteraka mahazo an’izao tontolo izao noho ny “coronavirus”.
Miteraka resabe amin’ny tontolon’ny politika eto Madagsikara ity raharaha ity satria maro ny manakiana azy satria hono tsy laharam-pahamehana.
Tsy hiditra lalina amin’izay maha laharam-pahamehana azy izay isika satria dia mba nisy ihany koa no manana fomba fijery hafa eo anatrehan’ny fananganana ity orinasa mpanamboatra fiarakodia GasyCar ity. Hatramin’ny anarany avy no asian’ny olona olana sy ady hevitra be.
Tianay ny manambara etoana ny tantara fohifohy ny fanamboarana fiarakodia vita teto Madagasikara mba hanampy ny ny fahalalana hoan’izay mbola tsy nahafantatra izany ary hahatonga ny efa mahalala hiverina amin’ny tantara ihany koa. Ny tantara dia tsy mba fanadino satria antokin’ny fandrosoana izany.
Tamin’ny repoblika voalohany dia karazana fiarakodia roa no vita teto Madagasikara tamin’ny andron’ingahy Philibert Tsiranana filohan’ny repoblika. Ny fandrafetana azy no tena natao teto fa ny kojakoja isan-karazany dia nafarana tany frantsa avokoa. Ny iray voalohany dia ny 2CV, izay mbola misy maro miriaria amin’izao fotoana izao. Ny iray faharoa dia ny 4L, izay nantsoina hoe “Tsitonta” no anarany. Mbola misy manana io fiarakodia io ny Malagasy vitsivitsy ankehitriny. Teo Andraharo teto Antananarivo no nisy ny orinasa nanao izany.
Tamin’ny repoblika faharoa dia nanao ny fiarakodia “Karenjy” tany Fianarantsoa ingahy Didier Ratsiraka. Ny Orinasa Imi (Institut Malagasy d’Inovation) no nanao ny fandrafetana izany fiarakodia izany ka môtera R18 no nitondra izany. Nisedra olana ity orinasa ity rehefa niala ingahy Ratsiraka ka mpivarotra “friperie” ao Fianarantsoa izay nampiasa ny trano nisy ity “Imi” ity no nanohy ny asa rehefa nahita ny fitaovana tao mbola raitra ka io Karenjy ankehitriny io. Nanamboatra fiarakodia manokana hoan’ny Papa ray masina ity orinasa ity ny taona 1989 sy ny taona 2019.
Nisy fiarakodia tena vita Malagasy iray antsoina hoe “MAHEFA” teto Antananarivo ny taona 1980 tany hoany. Olona tsotra nampiasa ny fahaizany manokany no nanamboatra ity fiara ity. Ho fahatsiarovana ilay tovolahy kely naniry ny fiaravita Malagasy mitondra ny anarana hoe Mahefa no antony nanomezana ny anarany.
Ny fiarakodia faha efatra dia izao hataon’ingahy Andry Nirina Rajoelina izao ka nampitondrana ny anarana hoe “GasyCar”.
Eo amin’izay famoronana fiara izay dia tsara ny mampahafantatra antsika fa tamin’ny andron’ny “Imi” voalaza eo aloha io ihany dia efa nahavita fiaramanidina na raoplanina vita tamin’ny hazo izay nantsoina hoe “Hitsikitsika” koa isika Malagasy ka nampiasan’ny tafika izany. Ary nahavita voalohany ny antsoina ihany koa ny solosaina na “ordinateur” izay natsoina hoe “lefona” isika ny taona 1989 .Io solosaina voalohany vita taty afrika.
Ny olana eto amin’ity firenena ity dia tsy misy ny fanohizana ny zava-bitan’ny teo aloha fa noho ny politika tsy mitovy dia fafana tanteraka ny zavatra vitan’ny teo aloha.